Volo fotsy ao am-bava
Ny endriky ny ratra sy ny fery eo amin'ny fonon-tsiranoka manga ao amin'ny lava-borona dia manondro ny fivoaran'ny aretina. Andeha hojerentsika ny fomba tokony hitondrantsika ny vava.
Sorena amin'ny loko fotsy - izany dia marika famantarana ny stomatitis, izay, indreto, dia karazany maro.
Miaraka amin'ny stomatitis afhthys, ny mucosa dia mipoitra, lasa rakotra aphthae, ary tonga marefo. Ny aretin-damba fotsy ao amin'ny vava (eo amin'ny takolaka, ny homamiadana, ny lela) dia miteraka fanaintainana mafy, izay tsy ahafahan'ny marary tsy misotro na mihinana, ary miresaka amin'ny fahasarotana mihitsy aza. Matetika ny aretina no miteraka aretina, mahasalama, nefa miteraka adin-tsaina, aretina viriosy, fihenanam-bozaka, aretim-pivalanana, tsy fahampian-tsakafo, tsy fahampian'ny vitamina sy mineraly ao amin'ny vatana.
Ny stomatitis herpétika dia miaraka amin'ny fisehon'ny fery amin'ny moka amin'ny vavany, toy ny fiteviky ny vozona mahazatra - tsy dia mitovy amin'ny fery fotsy ao am-bava.
Fa ny stomatitis candidde tsara indrindra no manintona ity soritr'aretina ity. Na izany aza, ny areti-mifindra ao amin'ny lava-bolo dia mety hanomboka koa noho ny trauma-masaka na ny fandoroana.
Malama eo amin'ny vava
Tsy toy ny stomatitis afghthus, izay ny tendrony dia mitovy amin'ny volkano misy volkano feno fotsy, miaraka amin'ny stomatitis vokatry ny fungi (indrindra indrindra - Candida), mibontsina ny moka, rakotra paty matevina. Ny fery toy izany ao am-bava dia miorina eo amin'ny kibay, eo ambanin'ny lela, eo amin'ny aty anaty molotra. Tafintohina kely kely miakatra eny ambonin'ny fiaramanidin'ny mucous membrane. Raha voadio izy, dia hipoitra etsy ambany ny tebiteby mivaingana sy marefo.
Ny aretina no mahazatra indrindra amin'ny ankizy.
Fikarakarana vatana fotsy ao am-bava
Rehefa voamarikao ny akofa marevaka, dia ilaina ny miresaka amin'ny stomatologist ary tsy mandany fotoana firy amin'ny fitsaboana. Ny dokotera dia hanoratra antiseptika, izay mila manalefaka ny vavanao. Raha maratra mafy ny fanaintainana dia ampiasaina ny anesthetika eo an-toerana, toy ny giles miaraka amin'ny lidocaine. Raha ny Ny akofa dia miaraka amin'ny fofona, misotro antihistamines.
Raha miahiahy momba ny areti-maso vokatry ny voan'ny kanseran'ny Candida ianao, dia mety hanala ny sira amin'ny soda ny fahatsapana hafahafa, saingy tsy maintsy atao izany aorian'ny fiterahana, raha tsy izany dia ho simba ny sary.
Amin'ny endrika herpetic dia maka Acyclovir (raha ankasitrahan'ny dokotera fotsiny).
Raha manomboka mikorontana ny fotsy hoditra ao am-bava, dia ilaina ny mandalo fitsapana, mifantoka amin'ny toetry ny tsy fahampiana: ny tsimokaretina mitranga am-bava dia miavaka amin'ny VIH .
Nahoana no miseho eo ambany maso ireo sobika?
Maskin'ny karoty amin'ny akne
Ahoana no fisafidianana ny endriky ny taovolo?
Ahoana no hanadiovana ny tarehy?
Basile implantation ny nify
Ny aretina amin'ny hoditra
Fitsaboana akne amin'ny tarehy
Aorian'ny fitrandrahana nify dia malemy ny gum
Maskila miaraka amin'ny glycerine ho an'ny tarehy - 7 fomba tsara indrindra hanova ny hoditrao
Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra
Kapila mody ho an'ny zatovo
Black manicure 2017 - loha lamaody sy hevitra tsara indrindra
Tweets ho an'ny tanora
Dieffenbachia - fikarakarana tokantrano
Mpanjakavavin'ny fanahy: misafidy ny lamba tadidy
Ny anjara asan'i Michael Jackson tao amin'ny mozika dia nandeha tany amin'ny British Joseph Fiennes
Fomba hanasana ondana - fitsipika fanasan-danja manan-danja ho an'ny fanenitra isan-karazany
Volo misy tanany
Ahoana no hahatonga azy ho zazavavy tsara tarehy?
Ahoana ny fisafidianana oven?
Computer tomography - ny zavatra rehetra tianao hahafantarana ny CT
Kakazo any Géorgie - fomba mahazatra mahazatra ho an'ny sakafo mahavelona
Ny Uterus dia nitombo - ny antony
Tablets "Turboslim" ho an'ny fatiantoka